Tuur Iron Bambooyin-saareyaasha - Shiinaha tuur Iron Bamka Bixiyeyaasha & Warshad
bambooyin gacanta lagu tuuro
Tuur bambooyin gacan bir ah Waqtigan xaadirka ah, bambooyin gacmeedyada badankood waxay qaataan naqshad jilicsan laba jibbaar leh, oo leh waxsoosaar cadaadis hooseeya iyo wax soo saar cadaadis sarreeya, laakiin marka mashiinka cadaadiska uu ku jiro soo saaridda cadaadis sare, socodka aad ayuu u yar yahay waxtarka shaqaduna wuu hooseeyaa. Qaadashada mashiinka gacmaheyga tusaale ahaan, xuduudaha gaarka ah waa sida soo socota: cadaadis la qiimeeyay (cadaadis sare) 63 MPa; socodka waxsoosaarka lagu qiimeeyay 1.5 ml / waqti; cadaadiska wax soo saarka cadaadiska hooseeya 5-10 MPa; cadaadis hooseeya socodka aragti ahaaneed 12 ml / waqti; taangiga saliidda Haydarooliga ...
Tuur Bamka Gacanta Birta
Tuur Bamka Beerta Birta
Tuur Codsiga Bambooyin Beerta Birta 1. Ilaha korantada ee fiilada dunta leh iyo qalabka adkeeya. Cadaadiska shaqada ee saliida Haydarooliga wuxuu gaari karaa 300mpa. Waqtigaan la joogo, dhuxusha Shiinaha, korontada, warshadaha kiimikada iyo warshadaha kale waxay adeegsanayaan nuts sare oo awood sare leh ama fidiyayaal Haydarooliga, oo leh cadaadis aad u sareeya oo hagida habeenta habeenta oo ah isha korontada, taasoo natiijo fiican laga gaadhay. 2. Qalab farsamo koorta jilicsan ama faragelinta dusha sare ee silsiladdu ku habboon tahay kala furfurka p ...
tuubooyin gacanta bir bir ah
tuubbada gacanta birta lagu tuuro Codsiga 1. Ilaha korontada ee fiilada dunta leh iyo qalabka adkeeya. Cadaadiska shaqada ee saliida Haydarooliga wuxuu gaari karaa 300mpa. Waqtigaan la joogo, dhuxusha Shiinaha, korontada, warshadaha kiimikada iyo warshadaha kale waxay adeegsanayaan nuts sare oo awood sare leh ama fidiyayaal Haydarooliga, oo leh cadaadis aad u sareeya oo hagida habeenta habeenta oo ah isha korontada, taasoo natiijo fiican laga gaadhay. 2. Qalab farsameysan koonbo siman ama faragelinta dusha sare ee silsiladda disassem ...
Tuur Bamka Gacanta Birta Manoorka saliida ku shaqeysa waa nooc ka mid ah bamka saliidda cadaadiska yar ee sarreeya kaas oo u rogi kara tamarta farsamada gacanta gacanta tamarta hidda. Waxay fulin kartaa howlo kala duwan sida qaadista, foorarsiga, toosinta, xiirashada, laabashada, isu imaatinka, kala furfurka iyo dhismooyinka qaar dhismahooda iyo dhismaha milatariga iwm si aad u shaqeyso, codsiyo kala duwan. Hawlgal xawaare labajibaaran, aut ...